Murray akasimudza goridhe
Murray akasimudza goridhe	Saturday, 11 August 2012 19:14	View Comments
ANDY Murray akasimudza menduru huru yegoridhe muupenyu hwake apo akakunda Roger Federer mufainari yemaOlympics kuWimbledon.Murray akakunda shasha yepasi rose iyi 6-2 6-1 6-4.
Mutambi uyu ndiye wekutanga wekuBritain kuhwina menduru yegoridhe kumaOlympics mumu­tambo uyu kubvira mu­gore ra1908 apo pakahwinwa naJosiah Ritchie.Anga asati ambokunda Federer mumita­mbo iyi gore rino pose pavaisangana mumita­mbo yeWimbledon.Kuhwina kwaakaita kwakatevera kukundwa kwainge amboita mavhiki mana adarika apo akakundwa 6-4 5-7 3-6 4-6 naFederer pamusha pake muEngland.
“Ndiko kekutanga kangu uye ndiko kuh­wina kwangu kukuru kwandaita muupenyu hwangu.“Ndakambokundwa zvinorwadza pandaita­mba uye zvinofadza kudzoka mukuhwina zvakadai nekuhwina Wimbledon,” akadaro.
Murray akazotamba imwe fainari zvekare musi wacho apo akatamba mutambo we­madoubles ana Laura Robson asi vakakundwa naVictoria Azarenka naMax Mirnyi vekuBelarus.
Mumutambo uyu vakakundwa zvavo ndokuhwina menduru yesirivha.Chikwata cheGreat Britain chiri pe­chitatu kumakwikwi eLondon 2012 pa­nyika dzine menduru dzakawanda idzo dzinosanganisira 16 dzegoridhe zvi­nova zvisina kuipa kune nyika iri kuitirwa mitambo iyi.
Murray, apedza kuhwina, akamhanya ndokunopemberera ane musikana wake uyo aiona mutambo akagara kuvatsigiri.